Mmezu IDS: Wlọ nkwakọba ihe na ọrụ mmezu | Martech Zone
Dị nnọọ afọ ole na ole gara aga, m na-a tour nke Ulo oru IDS ebe a na Midwest. Ọ bụụrụ m ihe mmeghe anya ebe ọ bụ na ahụtụbeghị m ọganihu ndị mere na lọjistik, ụlọ nkwakọba ihe na mmezu ụlọ ọrụ. Ngwa ngwa n'ihu na afọ a, mụ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị nwere mkparịta ụka dị ịtụnanya ebe m na-akọrọ ha gbasara ụlọ ọrụ ecommerce.
Ndị mmadụ amataghị na e nwere azụmaahịa azụmaahịa na-arụ ọrụ ugbu a ebe azụmaahịa anaghịdị arụ ọrụ ahụ. E nwere ụlọ ọrụ dị ka ID, nke na-achịkwa akụkụ ọ bụla nke inweta ngwaahịa nye onye ahịa gị (na azụ ma ọ bụrụ na enwere nloghachi). Mbupu a na-apụta site na onye nrụpụta - mana ejiri IDS na-echekwa mpaghara mpaghara.
Otu iwu na saịtị ndị na-ere ahịa na-aga na etiti mmezu ebe ejiri nlezianya tinye ya ma zigara ya onye ahịa. Nke a bụ ọganihu dị ịtụnanya na teknụzụ nke ndị na-ere ahịa nnukwu na obere na-erite uru.
Nnukwu ndị na-ere ahịa nwere ike iji IDS mee ihe iji chebe uto ma ọ bụ oge spikes na-achọ. Obere ndị na-ere ahịa nwere ike iji IDS si n'ihu na azụ maka ụlọ nkwakọba ihe ha niile, nkesa, na nloghachi ha. Site na mpaghara ọ bụla, IDS na-egosipụta njikọ aka maka ụlọ ọrụ ahụ.
N'ihi usoro okike na mgbanwe nke ndị ọrụ ya na sistemụ ya, IDS bụ onye ahọpụtara n'afọ ole na ole na Indianapolis. Ebe etiti Indianapolis na Midwest, ihu igwe a na-ahụ anya, na ọnụ ala obibi na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma maka ebe mmezu dị ka nke a.
Dịka ndị ahịa, ọ dị mkpa ka anyị mata na azụmaahịa a malitere. Eziokwu ahụ bụ na ị nwere ike ịkọwapụta ihe ntanetị, rụọ ya na ofesi, debe ya na etiti, ma kesaa ya na-enweghị ụlọ ọrụ gị na-emetụ ya aka bụ ihe ịtụnanya ma mepee ọnụ ụzọ maka teknụzụ ọhụụ.
Tags: idids mezuoIndianaIndiangwa ngwagbanwee ngwa ngwa